ARCORA Matte black washbasin taps - arcorarobinet
Welcome / Ime ụlọ ịsa ahụ / ARCORA Matte mmiri na-asacha oji
ARCORA Matte mmiri na-asacha oji
Matte nwa ịsa ahụ foset na-enye gị imewe na mma ke kiet ke otu. Ọrụ dị egwu na nke mara mma, nke mara mma. Zụta obere ụlọ ịsa ahụ na-acha ojii nke matte ugbu a!
Matte nwa ịsa ahụ ọkpọkọ 2321501B
Mepụta ime ụlọ ịwụ ahụ bụ ọrụ na-akwụghachi ụgwọ. Agbanyeghị na ị naghị anọkarị ogologo oge na ime ụlọ ịwụ ahụ, ịnwere ike iji ebe a zuru ike karịa, dịka ọmụmaatụ n'ime ụlọ ịsa ahụ ọkụ gị. Kedu ụzọ ọ bụla, ị gaghị eleda mmetụta nke ime ụlọ ịsa ahụ gị anya. Ọ kwesịrị ịbụ akụkụ nke mkpokọta nke ụlọ gị niile ma baa uru ka ị chee banyere ya nke ọma gbasara imepụta na arụmọrụ.
Bathroomlọ ịsa ahụ kwesịrị inye gị njikọta nke arụmọrụ na arụmọrụ. Arụ ọrụ bụ nke kachasị mkpa, dịka ọtụtụ oge ịchọrọ iji ọrụ bụ isi nke ime ụlọ ịwụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ịsa ahụ ma hichaa ezé mgbe ị na-agba ọsọ n'ụtụtụ. N'aka nke ọzọ, ọkachasị mgbe ị nọ n'ọnọdụ izu ike karị, ị nwere ike ịnụ ụtọ okirikiri ime ụlọ ịwụ ahụ, site na izu ike na bathtub gị dịka ọmụmaatụ. Uru nke ime ụlọ ịsa ahụ bụ na ị nwere ike itinye ihe okike gị niile n'ime ya. Enwere ọtụtụ nde nhọrọ mgbe ị na-eke ụlọ ịsa ahụ, yana ihe ọ bụla ị kpebiri, ị ga-enwe ihe ndozi pụrụ iche nke ọ na-enweghị onye ọzọ. Ma ọ bụ naanị gị bụ onye mmebe. Nwere ike isi n'ike mmụọ nsọ si na magazin na weebụsaịtị, mana ọ bụ gị ga-ekpebi ihe ime ụlọ ịwụ ahụ ga-adị.
Single oghere ụlọ ịwụ ahụ foset na nwa
Mgbe ị na-eke ụlọ ịsa ahụ dị mma, ị gaghị eleda mmetụta nke ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ anya. Dika ihe eji asa aru bu ebe ndi adighi anya, ulo ndi mmadu na ele anya ugbu a. Yabụ, ị kwesịrị iji nlezianya họrọ ihe ịsa ahụ nke ime ụlọ ịwụ. E wezụga arụmọrụ, ị chọrọ ime ụlọ ịwụ gị ịmasị ma gosi ụdị ị na-anya isi. Nke a pụtara na ị ga-ahapụ nhọrọ nke ụlọ ịsa ahụ ụdị ọkpọ mmiri n'oge mgbe ị na-ewu ụlọ ịsa ahụ. Ikwesiri ime igwe eji esi kichin ka ọ bụrụ akụkụ dị mkpa nke ime ụlọ ịsa ahụ.
Banyere sink gị, ị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ ụdị mmiri mmiri. Nwere ike ịhọrọ okpukpu abụọ ịsa ahụ ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ otu ihe ịsa ahụ ime ụlọ ịwụ. A na-akpọkwa ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye n'otu eriri mmiri. Ndị isi uru nke otu aka ụlọ ịwụ ahụ fosets bụ na i nwere ike ịchịkwa mmiri okpomọkụ naanị otu aka. Uru ọzọ metụtara na ịdị mfe nke nrụnye. Ebe ọ bụ naanị na ị chọrọ otu onu, ọ bụ nnọọ mfe iji wụnye otu oghere ụlọ ịwụ ahụ foset. Single oghere ụlọ ịwụ ahụ fosets abịa na ụdị nile nke ekwekọghị na aghụghọ. ARCORA's matte black bathroom foset na-enye gị ọmarịcha imewe na anya dị ka gooseneck na a obi ike ma pụrụ iche na agba.
Nkecha na ọtọ matte nwa ịsa ahụ foset
Nkecha na ọtọ matte ojii ụlọ ịwụ foset site ARCORA bụ ma dị mfe na-adịghị agafe agafe. Kwa square nke anụ ụlọ a mara mma nke ụlọ ịsa ahụ ejiri nlezianya rụọ ọrụ iji gbochie mmebi ma ọ bụ ọkọ. Ya mere, ọ ga-ekwe omume ịsacha ma debe akwa mmiri a na-acha odo odo nke matte nke ọma iji debe ya n'ụzọ zuru oke. Egwu ojii na-enweghị atụ na-enye pipụ ịsa ahụ ime ụlọ nwere anya nke oge a ga-abụ akụkụ dị mkpa nke ụlọ ịsa ahụ ọ bụla. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchọta ụdị ụdị ime ụlọ ịwụ ahụ maka ịsa ahụ na okpokoro ịwụ ahụ, dịka ọmụmaatụ, iji mepụta akụkụ dị mma na ndị ọzọ nke ime ụlọ ịwụ ahụ.
The Matte Black High Arc Bathroom Foset features a functional 5,8 inch nke ọma gooseneck silhouette. Igwe nsị na-enye mmiri zuru oke maka ịsa ahụ nke ọma. Mmiri mmiri na-aga n'ihu ma na-adịgide adịgide. Na mgbakwunye, nsụgharị a dị elu bụ ihe akaebe, yabụ na ị gaghị enweta uwe gị mmiri mgbe ị na-asa na ụlọ ịsa ahụ. Na ngwụcha, ịkwesighi ịgbatị ọbụ aka gị iji ruo mmiri ahụ, ebe ọ bụ na gooseneck na-agbanwe agbanwe na-enye gị mmiri ebe ịchọrọ. Iji mezue imewe gị, ị ga-ahụ ihe nkwụpụta ga-etolite iji mepụta nkwekọrịta na nsị gị.
Magburu onwe ya mma matte nwa ịsa ahụ foset
ARCORA na-eji ihe kachasị mma maka ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ. Facilitieslọ ọrụ ya nke oge a na-emepụta ihe na-ekwe nkwa nkenke na nhazi nke ihe niile mejupụtara ya. Ihe mkpuchi ime ụlọ ịsa ahụ nke ARCORA bụ ihe dị mkpa tozuru oke nke ahaziri maka ịrụ ọrụ kachasị. Ọ bụghị n'efu na ngwaahịa a dakọtara na igwe igwe anaghị agba nchara. Ihe na-enweghị nkụji seramiiki diski nke ARCORA Matte Black ụlọ ịsa ahụ na-ekpuchi ya. Nyocha nyocha na-egosi na diski brass na-anaghị adọkpụ ka na-agbanye n'efu mgbe usoro 500 gachara.
Ebube aka nke ARCORA matte black bath foset na-agbanwe agbanwe. Nwere ike ịchịkwa mmiri dị mfe mgbe ị ka na-enye nkwado zuru oke iji chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ ahụ. Tụkwasị na nke a, ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ na-acha uhie uhie na-amụba amụba abawanyela ka a na-arụzi ọkpọ ahụ siri ike nke ọla kọpa siri ike yana ihe ndị dị elu. Mgbe ị na-ejide eriri mmiri ịsa ahụ a na-acha uhie uhie si na ARCORA n'aka gị, ị ga-achọpụta ozugbo àgwà ọ na-enye.
Ezi uche dị ọnụ matte nwa ịsa ahụ foset
N'iji ihe eji eme ihe di elu, ARCORA nwere ike inye gi akwa nkpuru ahihia a nke oma na onu ahia. Nke mbu, ARCORA mara ebe izu ihe akuru na onu ahia. Nke abuo, ulo oru ihe eji emeputa ulo oru ARCORA nke oma na emeputa usoro mmeputa ego di ala. Thiszọ a, ị ga-enweta ndị a uru na ị na-emesi obi ike nke a elu mma, mara matte black ụlọ ịwụ foset na nke kacha mma uru maka ego ị ga-ahụ. Mgbe ịzụrụ Matte Black Bathroom Faucet si ARCORA, ị ga-enweta ihe niile ịchọrọ iji wụnye Matte Black Bathroom Faucet a dị mfe. Na mgbakwunye na plọg mmiri na-agbapụta, escutcheon n'efu maka ntinye 1 ma ọ bụ 3 ka etinyekwara. Ga-ahụ njikọ mmiri dị mkpa iji kwado nrụnye. Ngwa ụlọ ịsa ahụ ARCORA niile nwere oge ikike 5 zuru oke, ụbọchị 90 ga-akwụghachi ụgwọ yana mbupu mba ofesi n'efu!
The uru nke matte nwa ịsa ahụ foset na ilekiri:
Na-enye mmetụta dị egwu na ime ụlọ ịwụ ọ bụla
Agba di egwu matte ojii
Ọgbara ọhụrụ gooseneck mara mma
Ọ dị mfe ijikọta na ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ ndị ọzọ na-acha uhie uhie
E ji ọla kọpa mee ihe dị elu
Ọ dị mfe ihicha ma debe
ARCORA Chrome nnukwu ụlọ ịsa ahụ arc
ARCORA High Arc Chrome Igwe anaghị ata nchara Lavatory foset
ARCORA washbasin foset na igwe anaghị agba nchara ...